सत्तारुढ दलका नेताहरुले संसदमै खोले अहिले सम्मकै ठुलो पोल, आरोप प्रमाणित भए मन्त्रीहरु जेल जाने निश्चित !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
सत्तारुढ दलका नेताहरुले संसदमै खोले अहिले सम्मकै ठुलो पोल, आरोप प्रमाणित भए मन्त्रीहरु जेल जाने निश्चित !
काठमाडौँ – सत्तारुढ दलकै अधिकांस सांसदहरुले मन्त्रीहरु विरुद्ध संसदमै अावाज उठाएका छन्। सत्तापक्षकै सांसदहरुले आआफ्नो क्षेत्र र प्रदेशलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको अाराेप मन्त्रीहरु माथि लगाउँदै उनीहरकाे हरुको चर्को आलोचना गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लागि विनियोजित विधेयकमाथि बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा धारणा राख्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले विषयगत मन्त्रीहरुको आलोचना गरेपछि नेकपा खैलाबैला मच्चिएकाे छ। मन्त्रीहरुकाे अालाेचनामा प्रतिपक्षले समेत माैन समर्थन जनाएका छन्।
नेकपाका सांसद मेटमणि चौधरीले संसदमै म्याच फिक्सिङ गर्ने खेलाडीलाई जेल पठाइन्छ भने बजेटमा फिक्सिङ गर्ने मन्त्रीलाई किन जेल नपठाउने भनी सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रीहरुलार्इ तर्क गेरका थिए।
आवश्यकताको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुभन्दा मन्त्री मन्त्रीको मिलेमतोमा आआफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट र योजना पार्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘म्याच फिक्सिङ गर्ने खेलाडीहरुको हातमा हतकडी लाग्छ, जेल जानुपर्छ। आज मन्त्रीहरुले आफ्नो बजेट र प्रोग्राम फिक्सिङ गर्दे आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पार्ने काम गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘प्रोग्राम फिक्सिङ गर्ने मन्त्रीहरु जेल जानुपर्छ कि पर्दैन? जेल जानुपर्छ।’
मन्त्रीहरुको प्रोग्राम फिक्सिङले मुलुकको समृद्धिको बाटोलाई अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै उनले यस्ता मन्त्रीलाई जेल पठाउनुको विकल्प नरहेको तर्क गरे।
नेकपाका अर्का सांसद झपट बहादुर रावलले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै उनले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई प्रश्न गरेका छन्। उनले बजेट विनियोजनमा मन्त्री र नेताहरुले दुरदृष्टि राख्न नसकेको टिप्पणी गरे। बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रीहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, टोल र वडाभन्दा बाहिर गएर नेपालको मन्त्री बन्न नसकेको जिकिर गरे।
स्राेतका अनुसार सत्तारुढ दलका नेता नै मन्त्रीहरुमाथि अाराेप प्रत्याराेप लगाउँदा प्रधानमन्त्री केपी तनावित भएका छन्।